बाइडेनले सम्बोधन गरिरहेको बेला रुसले हान्यो मिसाइल, के छ अवस्था ? — Imandarmedia.com
बाइडेनले सम्बोधन गरिरहेको बेला रुसले हान्यो मिसाइल, के छ अवस्था ?
एजेन्सी। पोल्याण्डको सीमा नजिक रहेको युक्रेनी शहर लभिभमा रुसले मिसाइल आक्रमण गरेको छ। युरोप भ्रमणमा रहेका अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले पोल्याण्डको वार्समा सम्बोधन गरिरहेको समय पारेर रुसले लभिभमा एक भन्दा बढी मिसाइल आक्रमण गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।
युक्रेनको पश्चिमी शहर लभिभमा रुसले तीनवटा मिसाइल आक्रमण गष्रेको हो । एउटा मिसाइल कम्युनिकेशन टावर नजिकै खसेको थियो। यसैबीच लभिभका मेयर एन्ड्री साडोभीले लभिभमा भएको आक्रमण अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनका लागि रुसी सन्देश रहेको बताएका छन्।
उनले भनेका छन्, ‘मलाई लाग्छ आजको आक्रमण आक्रमणकारी रुसले राष्ट्रपति बाइडेनलाई पठाएको सन्देश हुन सक्छ, जो अहिले पोल्याण्डमा छन्। लभिभ शहर पोल्याण्डबाट ७० किलोमिटरको दूरीमा पर्छ।
‘मलाई लाग्छ पूरा विश्वले थाहा पाइसक्यो होला कि जोखिम कति गम्भीर छ, मेयर एन्ड्रीले भने।आक्रमणमा मानवीय क्षति भएको छैन तर पाँचजनालाई अस्पताल लगिएको उनले जानकारी दिएका छन्।
क्रेनी राष्ट्रतिको पछिल्लो अभिव्यक्तीले सिंगो युरोपमा डर बढाएको छ। रुसको आक्रमण युक्रेनमात्रै सीमित नहुने भन्दै राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीले पश्चिमा राष्ट्रसँग थप सैन्य सहयोगको माग गरेका हुन्।
उनले भनेका छन्, हामीले धेरै मागेका छैनौँ र माग्ने पनि छैनौँ। हामीले ३१ दिन पर्खिसकेका छौँ। युक्रेनले पश्चिमा राष्ट्रसँग लगातार लडाकु विमानको माग गर्दै आएको छ। रुसले गएको फेब्रुअरी २४ देखि युक्रेनमा आक्रमण गर्दै आएको छ।